अमेरिकामा तपाईको गाडी प्रहरीले रोकेमा के गर्ने ? (१२ टिप्स) « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकामा तपाईको गाडी प्रहरीले रोकेमा के गर्ने ? (१२ टिप्स)
तपाईले गाडी चलाइहेको बेलामा ट्राफिक नियमको उल्लंघन वा अन्य कुनै कारणवश तपाईले प्रहरीले रोक्न सक्छ । यसरी रोक्ने क्रममा तपाईले कैयन सावधानीहरु अपनाउनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा प्रहरीले तपाईमाथि गोली समेत चलाउन सक्छ ।
– यदि तपाईले प्रहरीले साइरन वा आपतकालिन बत्ति बाल्दै पछ्याइरहेको छ भने तपाईले गाडीलाई दायाँतिर लग्दै सडकको छेउमा सुरक्षित तरिकाले रोक्नुपर्छ । पछ्याएको थाहा पाउनासाथ जतिसक्दो छिटो गाडी साइड लगाएर रोक्नुपर्छ । यसबाट तपाई गाडी चलाइरहँदा आसपासमा भइरहेका गतिविधिप्रति पनि सचेत भएको संकेत मिल्छ ।
– गाडी रोक्ने क्रममा आफ्नो रिसलाई काबुमा राख्नुपर्छ । बायाँबाट दायाँ तिर गाडी लैजाने क्रममा टर्न सिग्नल दिनुपर्छ । गाडीको गति विस्तारै घटाउँदै लग्नुपर्छ । आत्तिएर एक्कासी रोक्न खोज्दा प्रहरीको गाडीले तपाईको गाडीलाई ठक्कर दिनसक्छ ।
– सुरक्षित स्थानमा रोकिसकेपछि गाडीको इन्जिन सामान्यहिसाबले बन्द गर्नुपर्छ । तपाईले यो अवस्थामा प्रहरीलाई केही शब्दमार्फत सम्मानपनि दर्शाउन सक्नुहुन्छ । तपाईले झ्यालको सिसा तल झार्नुपर्छ । तर तपाईको हात स्टेरिङमा हुन जरुरी छ । यदि अध्यारो छ भने तपाईले गाडीभित्रको बत्ति बाल्नुपर्छ ।
– तपाईले प्रहरीलाई त्रास सृजना हुने खालको कुनै गतिविधि गर्नु हुँदैन । किनभने यसरी गाडी रोक्दा प्रहरीहरु अपराधीहरुको गोलीबाट मारिएका कैयन घटनासमेत छन् । प्रहरीको लागि पनि गाडी रोकेर नजिक पुग्नु सबैभन्दा जोखिमपूर्ण काम भएकाले प्रहरी अधिकारीले त्रासको आकलन गरेर सजगता अपनाएका हुन्छन् ।
– प्रहरीले आदेश नगर्दासम्म तपाई गाडीबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन । साथै पछाडिको खल्तीबाट लाइसेन्स वा डब्बाबाट कागजात निकाल्न हतार नगर्नुहोला । तपाईले हतियार निकाल्न लागेको आशंका गरेर प्रहरीले जोखिमको अनुभव गर्न सक्छ । त्यसैले तपाईको लाइसेन्स वा कागजात खल्तीमा वा डब्बामा छ भने प्रहरीले जानकारी गराएर प्रहरीले अनुमति दिएपछि निकाल्नुपर्छ । झुक्ने, हातखुट्टा यताउता चलाउने गर्दा प्रहरीले हतियार निकाल्न लागेको आशंका गर्दै गोली चलाएका कैयन घटनाहरु छन् ।
– नआत्तिनुहोस् । शान्त रहनुहोस् । लागुऔषधको काम वा मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाएको अवस्था बाहेक अरु अबस्थामा तपाई नर्भस हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तपाईले थोरै जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ वा इन्सुरेन्स केहीमात्रामा बढ्न सक्छ । शान्त तरिकाले कुरा गर्नुहोस् ।
– यदि तपाई टिकटको बिरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने योजना बनाउनुभएको छ भने उत्तर छोटो दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो गल्ती कबोल गर्नुभन्दा मलाई थाहा छैन भनेर जवाफ दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रहरीले तपाईलाई के गल्ती गर्नुभयो थाहा छ भनेर सोध्न सक्छ । तपाईले मैले गाडी बढी स्पीडमा चलाएको थिएँ भन्नु भन्दा थाहा छैन भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
– कतिपय साना गल्तीका लागि तपाईले माफ मागेर समेत छुटाकारा पाउनुहुनसक्छ । मलाई माफ गर्नुहोस् अर्कोपटकदेखि यस्तो कुरामा ख्याल गर्छु भनेर नम्र तरिकाले माफी मागेर पनि छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
– सामान्यतया ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको मामलामा प्रहरीलाई तपाईको गाडी सर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । तर त्यसमा पनि केही अपवादहरु छन् । प्रहरीले सामान्य तरिकाले हेर्दा तपाईले केही लुकाउन खोजेको पाएमा, बियरको खुल्ला बोटल देखेमा, लागु पदार्थ भरिएको आशंकाका बिडीहरु देखेमा घटना थप जटिल बन्नसक्छ । यदि तपाईलाई गिरफ्तार गरिएमा र गाडी जफत गरिएमा प्रहरीले गाडीभित्र खानतलासी पनि लिनसक्छ ।
– ट्राफिक उल्लंघनका क्रममा रोक्ने प्रहरी अधिकारीले तपाईलाई गाडीबाट बाहिर निस्कन समेत बाध्य पार्नसक्ने अधिकार छ । यदि प्रहरीले गाडीबाहिर निस्कन आदेश वा अनुरोध गरेमा तपाईले कुनै बाधा व्यवधान खडा नगरी बाहिर निस्कनुपर्छ । प्रहरीले त्यतीबेला तपाईको शरिरको खानतलासी गरेर हतियारको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने जोखिमपूर्ण बस्तुहरु कब्जामा लिनसक्छ ।
– तपाई आफूमात्र नबोली प्रहरी अधिकारीलाई बोल्न दिनुपर्छ । अधिकारीले लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन वा इन्सुरेन्सको प्रमाण मागेमा ओके, स्योर जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर त्यस्ता कागजातहरु दिनुपर्छ । कागजात दिइसकेपछि तपाईले आफ्नो हात स्टेरिंगमा राख्नुपर्छ । अधिकारीले नमाग्दै पहिले नै कागजात ठिक्क पारेर दिने हतारो पनि गर्नुहुँदेन । सामान्यतया तपाईले रोक्ने क्रममा नै प्रहरीले तपाईलाई टिकट दिने निश्चय गरिसकेको हुन्छ । तर कहिलेकाँही चेतावनीमात्र दिनका लागि रोकेको भएमा तपाईले नराम्रो व्यवहार गरेको खण्डमा टिकट पाउन सक्नुहुन्छ । प्रहरीले कुनै सोधीखोजी गर्दा तपाईले धेरै तर्कवितर्क गर्नु हुँदैन । बरु तपाईलाई चुप बस्ने अधिकार छ । तपाईले गल्ती नगरी टिकट पाउनुभएको खण्डमा तपाईलाई अदालतमा जाने अधिकार छ ।
– सामान्यतया ट्राफिक नियम उल्लंघनको केसमा तपाईले वकिल लगाउनु आवश्यक पर्दैन । तर मादकपदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाएकोबेलामा प्रहरीले भेटाएमा भने तपाईले अनुभवप्राप्त वकिल लगाउनुपर्छ ।
जनचेतनाका लागि नोलोबाट साभार ।